FITSIPIKA ANATINY | TAMIFA Madagascar
And 01: Ity FITSIPIKA ANATINY ity no mameno ny SATA FOTOTRA IFAMPIFEHEZAN’NY TAMIFA Madagascar ka arahina amin’ny fomba fampiharana azy eo amin’ny ambaratonga rehetra anatin’ny Fikambanana.
I/ NY AMBARATONGAM-PANDAMINANA
And 02: Miisa dimy (5) NY AMBARATONGAM-PANDAMINANA ato anatin’ny Fikambanana.
Ireto avy izany:
ü NY VAOMIERA
ü NY SAMPANA
ü NY RANTSANA
ü NY FOIBE
ü NY FIVORIAMBE
And 03:– Ny VAOMIERA dia ambaratonga fototra natao hihevi-draharaha sy hanamora ny fiatrehan’ny Fikambanana ny drafitra nosoritan’ny FIVORIAMBE. Izy no manao ny fandinihana sy fanadihadiana lalindalina kokoa ireo sehatr’asa sahanina araka izay manandrify azy isanisany ka mitondra ny fehin-kevitra vitany eo anatrehan’ny FILAN-KEVITRA FOIBE.
— Misy araka izany ny VAOMIERA MAHARITRA izay ny FIVORIAMBE no manasokajy azy. Misy koa ny VAOMIERA TSY MAHARITRA izay voafintina kokoa ny asany ary voafetra ny fotoana ijoroany ka ny FILAN-KEVITRA FOIBE no manapaka ny amin’ny fananganana izany.
— Ny Mpikambana TAMIFA Madagascar tsirairay dia tsy maintsy mirotsaka eo anivon’ny VAOMIERA iray fara-fahakeliny.
And 04:– Ny SAMPANA dia ambaratonga manokana natao hanitarana sy hampiroboroboana ny ambaindain’ny Fikambanana ka ireo Mpikambana manana fifandraisana iarahana ankoatra ny maha samy TAMIFA Madagascar avy amin’ny sokajim-piaraha-monina sy/na arak’asa no mifampivondrona ao aminy. (Ohatra: VEHIVAVY,MPIRAY ASA, SOKAJIN-TAONA )
— Ny FIVORIAMBE no manapaka ny fananganana SAMPANA. An-tsitrapo kosa ny fidirana ho Mpikambana ao aminy.
And 05: — Ny RANTSANA dia ambaratonga natao handrindrana ny raharahan’ny Fikambanana isam-ponenana sy faritra. Indrindra eo amin’ny fifandraisana anatin’ny samy Mpikambana.
— NY MPANDRINDRA FOIBE no mankato ny fampijoroana RANTSANA iray sy mametra ny fandaminana azy.
And 06: — Ny ambaratonga tsirairay mijoro dia tsy maintsy manana Mpitari-draharaha iray avy sy rejistra fitanana an-tsoratra ny fivoriana sy ny raharaha ataony.
— Ny Filan-kevitry ny isan-tokony no mifampifidy amin’ny samy Mpikambana ao aminy izay ho Mpitari-draharahany sy izay fizaràna andraikitra ao aminy.
— Afaka manangana eo anivony rafitra ambany fiadidiana toy ny fisian’ny zana-baomiera sy fifampifehezana an-tokantrano izy ireo mba ahazoany manatsara ny fomba fiasany.
And 07:– Ny FOIBE dia ambaratonga mandamina sy mitantana ankapobeny ny asam-pikambanana.
— Ireo Mpikambana ao anatin’ny BIRAO MAHARITRA izay tondroin’ny And 12 amin’ny sata fototra no BIRAO FOIBE.
— Ny fivoriana iarahan’ny Mpitari-draharahan’ny VAOMIERA MAHARITRA sy ny SAMPANA isanisany mijoro miaraka amin’ny BIRAO FOIBE no FILAN-KEVITRA FOIBE.
And 08: — Ny FIVORIAMBE dia ambaratongam-pitondrana ambony indrindra ato anatin’ny Fikambanana.
— Solontena voafidy sy nomem-pahefan’ny Mpikambana rehetra izay ny FILAN-KEVITRA FOIBE no mametra ny isany no mivory amin’ny FIVORIAMBE.
— Amin’ny FIVORIAMBE rehetra dia izay toe-javatra voasoratra amin’ny fandaharam-potoana ihany no azon’ny mpivory hakàna fanapahan-kevitra.
— Ny fivoriana hanaovana tomban’ezaky ny asa vita, fandrafetana ny asa ho avy, fankantoavana ny kaontim-pitantanana sy ny teti-bola ary ny fanavaozana ireo Mpitarika ao amin’ny BIRAO FOIBE no FIVORIAMBE ARA-POTOANA.
— Afaka manao FIVORIAMBE TSY ARA-POTOANA anefa raha tapaky ny FILAN-KEVITRA FOIBE na nohon’ny fangatahan’ny 1/3 Mpikambana.
And 09:– Raha misy fangatahana FIVORIAMBE TSY ARA-POTOANA ataon’ny 1/3 Mpikambana, ny Filohan’ny Fikambanana dia tsy maintsy miezaka ny miantso sy handavorary izany ao anatin’ny dimy amby efapolo (45) andro fara- fahatarany aorian’ny naharaisany azy. Raha toa anefa ka tsy tontosa izany dia azo adika avy hatrany ho hadisoana lehibe eo amin’ny Fikambanana.
— Ny Mpikambana raikitra sy ara-dalàna rehetra ato anatin’ny TAMIFA Madagascar no antsoina sy mandray anjara amin’ny FIVORIAMBE angatahan’ny 1/3 Mpikambana.
II/ NY FITANTANAM-BOLA
And 10: Ny MPITANTAM-BOLA FOIBE no miandraikitra amin-kalalahana ny asa rehetra momba ny raharaham-bola amam-pananana ampiasain’ny Fikambanana. Na izany aza anefa, ny famoaham-bola dia izay mifandraika amin’ny fanapahan-kevitry ny FIVORIAMBE teo amin’ny fankatoavana ny teti-bola sy arakaraky ny vola miditra ihany. Manokatra kaonty amin’ny anarany any amin’ny ambaratonga mitahiry vola araka izany ny Fikambanana.
And 11: Ny SAMPANA, ny RANTSANA isanisany mijoro dia mahazo manao fitantanam-bola sy fihetsiketsehana o fidiram-bolany manokana. Izany anefa dia tsy maintsy hanaovany fampahafantarana mialoha amin’ny MPITANTAM-BOLA FOIBE.
And 12: KAONTIM-PITANTANANA
— Amin’ny FIVORIAMBE ARA-POTOANA no hankatoavana ny kaonti-pitantanana ka ny MPITANTAM-BOLA FOIBE no maneho izany eo antrehan’ny Mpikambana rehefa avy nahazo ny faneken’ny MPANAMARIN-KAONTY.
— Mpikambana roa (2) ivelan’ny FILAN-KEVITRA FOIBE fidiana isaky ny FIVORIAMBE ARA-POTOANA no MPANAMARIN-KAONTY.Afaka mitaky amin’ny MPITANTAM-BOLA ireo singan-taratasy samihafa ilaina ho fanamarinana ny kaontim-pitantanana izy ireo.
— Ny FIVORIAMBE no mitsara raha sendra misy ny fifanolanana.
And 13: TETI-BOLA
— Amin’ny fandrafetana ny teti-bola rehetra ka haminavinana ny tombatomban’ny vola miditra sy mivoaka dia ny FILAN-KEVITRA FOIBE eo ambany fitarihan’ny MPITANTAM-BOLA FOIBE no mamolavola izany mialoha ny hitondrana azy eo amin’ny FIVORIAMBE.
— Tsy azon’ny FIVORIAMBE ahena ny totaly ankapoben’ny vola miditra amin’ny teti-bola izay aroso. Toa izany koa ny fampitomboana ny totaly ankapoben’ny vola mivoaka.
— Raha toa ka tsy lany na tsy mbola vita tsara ny fandinihana ny teti-bola dia ny FILAN-KEVITRA FOIBE no manana fahefana hitondra fanovana sy mampanan-kery azy farany. Toy izany koa ny amin’ny fanitsiana teti-bola anelanelam-potoana. Izany rehetra izany anefa dia tsy maintsy hanaovany fampahafantarana amin’ny FIVORIAMBE manaraka.
III/ FIFAMPITONDRANA ANKAPOBENY
And 14: FIROTSAHANA HO MPIKAMBANA
— Mameno ny fepetra firotsahana ho mpikambana izay faritan’ny FILAN-KEVITRA FOIBE ireo maniry izany ka ny MPANDRINDRA FOIBE no manamarina azy.
— Atao hoe Mpikambana raikitra izay voasoratra anaty rejistra natokana ho amin’izany. Atao hoe Mpikambana ara-dalàna kosa rehefa nahaloa ara-potoana ny latsakemboka.
And 15: FIALANA HO MPIKAMBANA
An-tsitrapo ny fialana ho Mpikambana kanefa midika ho hadisoana sy fanalàna tena avy hatrany:
ü Ny tsy fanarahana fitsipika sy fandavana ny fanapahan-kevitry ny Fikambanana.
ü Ny tsy fandoavana misesisesy ny latsakemboka
ü Ny tsy fandraisana anjara tsy misy antony manokana intelo (3) misesy amin’ny fiantsoana ataon’ny Fikambanana.
And 16: FITONDRAN-TENA
— Fitondran-tena miaro fifanajana hatrany no takiana eo amin’ny samy Mpikambana sy isan’ambaratonga.
— Mandritra ny fivoriana na ny asa rehetra atrehin’ny Fikambanana dia tsy azo atao ny mamofona na misotro zava-pisotro misy alikaola. Toy izany koa ny fanaovana fihetsika mety hahatafintohina na teny mamoafady.
And 17: FILAN-KEVIM-PIFEHEZANA
— Manan-jo hiaro-tena ny Mpikambana voampanga ho nanao hadisoana ka ny fivorian’ny Mpikambana anatin’ny BIRAO FOIBE no FILAN-KEVIM-PIFEHEZANA mahazo mitsara sy manao famaizana.
— Ny FIVORIAMBE kosa no mitoetra ho FILAN-KEVIM-PIFEHEZANA raha toa ka Mpikambana iray amin’ny BIRAO FOIBE no iharan’ny fiampangana.
IV/ FEPETRA FANAMPINY
And 18: — Ny MPANDRINDRA FOIBE no mampahafantatra amin’ny ambaratonga rehetra ny modelin’ ny mari-panavahana ekena hanan-kery ato amin’ny Fikambanana(Lohan-taratasy,Fitomboka,faneva……).
— Soratana avy hatrany ho ao amin’ny fonenan’ny Filoha na Mpitarika isan-tokony ny fivantanan-draharaha ny Fikambanana raha toa ka tsy misy toerana manokana voatondro ho amin’izany.
And 19:– Mahazo manatrika ny fivoriana sy ny asa rehetra atrehin’ ny isam-BAOMIERA, SAMPANA, RANTSANA, FOIBE, FIVORIAMBE ny Mpikambana ivelan’ny ambaratonga misy azy na ny olona hafa mihitsy ivelan’ ny fikambanana.Afaka miara mandini-draharaha izy ireo nefa tsy mandray anjara kosa eo amin’ny fanapahan-kevitra.
— Na izany aza anefa, tsy azon’iza na iza atrehina ny fivoriana na ny asan’ny isan’ambaratonga afa-tsy ireo tompon’andraikitra eo anivony ihany raha toa ka angatahan’ny FILOHA na ny Mpitari-draharaha izany.
And 20: — Raha misy sampona tsy ahafahan’ny Mpikambana iray manatontosa ny andraikiny,indrindra eo amin’y fitarihana dia izay Mpikambana nomeny fahefana no misolo tena azy vonjimaika.Raha tsy misy anefa ny fanomezam-pahefana dia izay Mpikambana manarakaraka azy eo amin’ny ambaratonga iadidiany no miantoka ny asany vonjimaika.
— Raha toa kosa anefa ka tena fahabangan-toerana tanteraka noho ny antony mety ho samihafa dia atao ny fanoloana.
And 21: Raha ny Mpitarika manontolo ao anatin’ny BIRAO FOIBE no iharan’ny fahabangana tanteraka dia izay Mpikambana enina (6) amin’ny Mpitarika isam-BAOMIERA sy SAMPANA no manao ny fisoloan-toerana ka miara-mitondra vonjimaika mandra-pahatongan’ny FIVORIAMBE manaraka.
And 22:– Mamindra fahefana avy hatrany amin’ny mpisolo toerana azy ny Mpikambana anatin’ny BIRAO FOIBE raha vantany vao voatendrin’ny FIVORIAMBE ny fanavaozana na ny fanoloana.
__Manohy ny andraikiny kosa anefa ny BIRAO FOIBE amperin’asa raha toa ka mbola tsy vita ny fifidianana vaovao aorian’ny fahataperan’ny fe-potoana iasany.Toy izany koa ireo MPANAMARIN-KAONTY.
And 23: Ny FILAN-KEVITRA FOIBE no mamaritra ny fepetra hafa tsy voalazan’izao Fitsipika anatiny izao.
Navoaka hanan-kery, androany faha………………..
Posted by Charles on 14 septembre 2011 at 3 h 23 min